Cimraan Oo Lagu Dilay Magaalada Muqdisho. – Calamada.com
Cimraan Oo Lagu Dilay Magaalada Muqdisho.
calamada August 13, 2018 1 min read
Dilal qoshaysan ayaa markale ka dhacay qaar kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir kuwaas oo lala beegsaday saraakiil katirsan sirdoonka dowladda Federaalka.
Xalay fidkii ayay xoogag hubeysan degmada Huriwaa ku dileen sarkaal sare oo katirsanaa sirdoonka dowladda Federaalka, goob joogayaal ayaa xaqiijiyay in rag bastoolado ku hubeysan ay sarkaalka khaarijiyeen kadibna goobta si Nabad gelya ah uga dhaqaaqeen.
Weerarkan oo ka dhacay xaafadda Suuqa Xoolaha ee Waqooyiga Muqdisho ayaa lagu dilay sarkaal ciidan, Idaacadda Andalus ee Afka Xarakada Al Shabaab ku hadasha ayaa sheegtay in sarkaalka ladilay laga qaatay qori uu watay.
Sarkaalka ayaa lagu magacaabi jiray Cimraan wuxuuna kamid ahaa saraakiisha caanka ka ah degmada Huriwaa “Mujaahidiinta ayaa xaafadda Suuqa Xoolaha ku khaarijiyay sarkaal Ashahaadda ladirir ah oo Murtadiinta katirsanaa qori uu watayna waa laga qaniimeystay” ayaa lagu yiri warka lagasii daayay Andalus.
Bishii lasoo dhaafay dilal qorsheysan iyo weeraro naf hurnimo ayaa lagu beegsaday xarumo muhiim ah oo dowladda Federaalka ay ku leedahay bartamaha magaalada Muqdisho.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 02-12-1439 Hijri.
Next: Qarax Culus Oo Lala Beegsaday Askarta Kenya.